လူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ Immunoglobulin G (Igg) သည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ Play မှပါဝင်သနည်း။
Immunoglobulin (ပantibိပစ္စည်း)သွေးဖြူဥထုတ်လုပ်သည့် glycoprotein မော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Immunoglobulins antibodies များသည်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကဲ့သို့သော antigen အချို့ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီပantibိပစ္စည်းတွေကအဲဒီ antigen တွေပျက်စီးစေတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သူတို့မရှိမဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုအစိတ်အပိုင်းဖွဲ့စည်းသည်။
Placental နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်အဓိက Immunoglobulin အမျိုးအစား ၅ မျိုးရှိသည်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်အစဉ်လိုက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး antibody မိုးသည်းထန်စွာကွင်းဆက်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေသဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် IgA, IgD, IgE, IgG နှင့် IgM antibodies များပါ ၀ င်သည်။ ဤအပodyိပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင်ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်၊
IgA ပodိပစ္စည်းများကိုအဓိကအားဖြင့်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သောခန္ဓာကိုယ်နေရာများတွင်ရှိပြီးပြင်ပအရာဝတ္ထုများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ဤဒေသများတွင်နှာခေါင်း၊ လေလမ်းကြောင်း၊ အစာခြေလမ်းကြောင်း၊ ယောနိ၊ နား၊ မျက်လုံးအပြင်မျက်နှာပြင်တို့ပါဝင်သည်။ တံတွေး၊ မျက်ရည်နှင့်သွေးတို့တွင် IgA ပantibိပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ IgG ပantibိပစ္စည်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအရည်တွင်ရှိသည်။ အဆိုပါ IgM ပiesိပစ္စည်းများကိုသီးသန့်တွေ့ရှိရသည် သွေးနှင့် lymph အရည်။
IgE ပantibိပစ္စည်းများသည်အဆုတ်၊ အရေပြားနှင့်ချွဲသောအမြှေးပါးများအတွင်း၌တည်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် IgD ပantibိပစ္စည်းများကိုဝမ်းဗိုက်နှင့်တစ်ရှူးများတွင်တွေ့ရသည်။
ဒီမှာ IgG ကိုအာရုံစိုက်ရမယ်။
Immunoglobulin G (IgG) ဆိုတာဘာလဲ။
Immunoglobulin G (IgG) monomer တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူ့သွေးရည်ကြည်ထဲမှာအရိုးရှင်းဆုံး antibody ကိုအမျိုးအစား။ ထို့အပြင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ immunoglobulin တစ်ခုလုံး၏ ၇၅% သည်လူတို့၏ immunoglobulin ၏အဓိကအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
သွေးဖြူဥများသည် IgG antibodies ကိုထုတ်လွှတ်ပြီး antigen များတိုက်ဖျက်ရန်ဒုတိယကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုပုံစံဖြင့်ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်များပြားလာခြင်းနှင့် antigen ၏တိကျမှုကြောင့် IgG သည် immunological လေ့လာမှုများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျရောဂါရှာဖွေခြင်းတို့တွင်များစွာအသုံးဝင်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်မျိုးလုံးတွင်ပုံမှန်ပantibိပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် IgG သည် glycoproteins များဖြစ်ပြီးတစ်ခုစီတွင် polypeptide ကွင်းဆက်အမျိုးအစား ၂ ခုပါတူညီသောမိတ္တူနှစ်ခုပါသော polypeptide ချည်နှောင်လေးခုပါ ၀ င်သည်။ polypeptide ကွင်းဆက်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးမှာအလင်း (L) နှင့်လေးလံသော gamma (γ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှစ်ခုသည် disulfide bonds များအပြင် noncovalent force များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
immunoglobulin G မော်လီကျူးများအကြားကွာခြားချက်ဟာသူတို့ရဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်အစီအစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော် IgG မော်လီကျူးတစ်ခုချင်းစီတွင် L L ကွင်းဆက်နှစ်ခုသည် H ချည်နှောင်များနှင့်မတူကွဲပြားသည်။
IgG မော်လီကျူး၏အဓိကအခန်းကဏ္aသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ effector စနစ်များနှင့် antigen အကြားရုန်းရင်းဆန်ခတ်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
Immunoglobulin G (IgG) တွင်မည်သည့်အမျိုးအစားခွဲအမျိုးအစားပါရှိသနည်း။
Immunoglobulin G (IgG) တွင် disulfide bond အရေအတွက်နှင့်ပတ္တူဒေသအလျားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တို့တွင်ကွဲပြားသော subclasses လေးခုပါရှိသည်။ ဤအမျိုးအစားခွဲများတွင် IgG 1, IgG 2, IgG3နှင့် IgG4တို့ပါဝင်သည်။
IgG1 အဓိက IgG တစ်ခုလုံး၏ ၆၀ မှ ၆၅% ခန့်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည်လူ့သွေးရည်ကြည်များတွင်အများဆုံးတွေ့ရသောအိုင်ဆိုတုပ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဤလူတန်းစား immunoglobulin သည်အန္တရာယ်ရှိသောပရိုတင်းများနှင့် polypeptide antigen များကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီပေးသောပantibိပစ္စည်းများစွာကြွယ်ဝသည်။ IgG 60 တိုက်ဖျက်သောပရိုတင်းများဥပမာတစ်ခုမှာဆုံဆို့၊ မေးခိုင်၊ ဘက်တီးရီးယားအဆိပ်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်းများဖြစ်သည်။
မွေးကင်းစကလေးများသည်တိုင်းတာနိုင်သော IgG1 ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုရရှိသည်။ ဒါဟာနို့စို့အရွယ်ကာလအတွင်းတုံ့ပြန်မှုသည်၎င်း၏ပုံမှန်အာရုံစူးစိုက်မှုရောက်ရှိသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ထိုအဆင့်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုအောင်မြင်ရန်ပျက်ကွက် hypogammaglobulinemia, gamma globulin အမျိုးအစားများအားလုံးမလုံလောက်အဆင့်ဆင့်၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုယ်ခံစွမ်းအားရောဂါခံစားနေရပြီးနိုင်ကြောင်းအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။
immunoglobulin ဂရမ် subclass2လူ့သွေးရည်ကြည်များတွင်အများဆုံးတွေ့ရသောအိုင်ဆိုတုပ်၏ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ Immunoglobulin ဂျီ၏ ၂၀ မှ ၂၅% ခန့်သည် immunoglobulin g ၏ subclass 20 ၏အခန်းကဏ္ The သည် polysaccharide antigen ကိုခုခံအားစနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ က Streptococcus အဆုတ်ရောင် or Haemophilus influenzae.
ကလေးငယ်သည်အသက် ၆ နှစ်မှ ၇ နှစ်အရွယ်သို့ရောက်သောအခါပုံမှန်“ အရွယ်ရောက်သူ” immunoglobulin g အမျိုးအစားခွဲ ၂ ၏ပုံမှန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိသည်။ IgG2 ၏ချို့တဲ့မှုကိုမကြာခဏအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှုများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီးမွေးကင်းစကလေးများအကြားအများအားဖြင့်ပျံ့နှံ့သည်။
အလားတူပင် IgG 1 တွင် IgG3 အမျိုးအစားခွဲရှိ Immunoglobulin G isotopes များသည်ပantibိပစ္စည်းများများပြားသည်။ ဤပantibိပစ္စည်းများသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအန္တရာယ်ရှိသောပရိုတိန်းနှင့်ပိုလီပိုလီဖိုက်ဂျင်ဓာတ်ကိုကျော်လွှားရန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုကိုကူညီသည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိစုစုပေါင်း IgG ၏ ၅% မှ ၁၀ %သည် IgG5 အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့သည် IgG10 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထင်သာမြင်သာနည်းပါးသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင် IgG3 သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအရိပ်လက္ခဏာရှိသည်။
စုစုပေါင်း IgG4၏ IgG4ရာခိုင်နှုန်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 10% အောက်တွင်ရှိသည်။ သတိပြုရန်မှာ Immunoglobulin G ၏ဤအမျိုးအစားခွဲသည်အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးများအကြားတွင်အလွန်အမင်းနိမ့်ကျသောအဆင့်များ၌ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ immunoglobulin g subclass4ချို့တဲ့မှု၏ရောဂါကိုအနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်သာဖြစ်နိုင်သည်။ ။
သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်များသည် immunoglobulin g subclass4၏လုပ်ဆောင်ချက်အတိအကျကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အစပိုင်းတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည် IgG4 ချို့တဲ့မှုကိုအစားအစာဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရပန်ကရိယရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပန်ကရိယ၊ ထို့ကြောင့်, သုတေသနတွေ့ရှိချက်များ၏အတိအကျအခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်။ ရှုပ်ထွေးကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည် immunoglobulin ဂရမ် subclass 4.
တူညီသော subclass တူသော Immunoglobulins သည် homology တွင်အလားတူ 90% နှင့်ဆင်တူသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွဲပြားခြားနားသော subclasses ပိုင်သောသူတို့အားသာ 60% ဆင်တူမျှဝေပါ။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့် IgG subclasses လေးခု၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်များသည်အသက်အရွယ်နှင့်အညီပြောင်းလဲသည်။
Immunoglobulin G (Igg) ၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
IgM antibody သည်အဓိကကိုယ်ခံစွမ်းအားတုန့်ပြန်မှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ IgM antibody သည်အဓိကတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ရှောက်သည်။ အထူးသဖြင့် immunoglobulin g antibody သည်ရောဂါပိုးများနှင့်အဆိပ်များကိုဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့်မှိုများကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်မှကာကွယ်ပေးသည်။
၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံးပodyိပစ္စည်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်နို့တိုက်သတ္တဝါ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အပေါများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိပantibိပစ္စည်းအားလုံး၏ ၈၀% အထိရှိသည်။
၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် IgG သည်လူ့အချင်းချင်းထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အဆောက်အအုံတွေကြောင့်တကယ်တော့တခြား Ig class တွေကဒီလိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မွေးကင်းစကန ဦး လများအတွင်းမွေးကင်းစကိုကာကွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အဓိက immunoglobulin g အကျိုးကျေးဇူးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
IgG မော်လီကျူးများသည်Fcγ receptors များနှင့်ဓာတ်ပြုပြီး macrophage၊ neutrophil နှင့်သဘာဝလူသတ်သမားဆဲလ်ဆဲလ်များမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်၎င်းတို့အားအားမရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်မော်လီကျူးများကဖြည့်စွက်သည့်စနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
အဖြည့်ဖြည့်စနစ်သည်ကိုယ်ခံအားစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္microမှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှပိုးမွှားများနှင့်ဒဏ်ရာရသောဆဲလ်များကိုဖယ်ထုတ်ရန် antibody နှင့် phagocytic cell capacity ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစနစ်သည်ပtheိပစ္စည်းများ၏စွမ်းရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖျက်ဆီးကာ၎င်းတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ၎င်းသည် immunoglobulin g အကျိုးကျေးဇူးနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် immunoglobulin g antibody ကိုထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှောင့်နှေးသောတုန့်ပြန်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကဒီ antibody ကိုကာလရှည်ကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ရောဂါပိုးများကိုတိုက်ဖျက်ရုံသာမကသင့် system မှဖျက်ဆီးခံရတဲ့သူများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
မြင့်မားသောသွေးရည်ကြည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် IgG သည် passive immunization အတွက်အထိရောက်ဆုံးပantibိပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် IgG သည်သင့်အားမကြာမီကကူးစက်မှုသို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြောင်းညွှန်ပြသည်။
IgG Powder အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှု
IgG အမှုန့် ကြွယ်ဝသော immunoglobulin G (IgG) အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်သန့်စင်ပြီးအဟာရဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အားအားကောင်းသည့်ကိုယ်ခံအားတုန့်ပြန်မှုရရှိစေရန် IgG ၏အမြင့်ဆုံးသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးသည်။
IgG Powder ၏အဓိကပါဝင်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သော immunoglobulins အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသော bovine colostrum ဖြစ်သည်။ ဤ immunoglobulins များသည် Immunoglobulin G (IgG) အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောလူ့ပantibိပစ္စည်းများအတွက်သီးခြားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ immunoglobulin g colostrum သည်ရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကိုမြှင့်တင်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
immunoglobulin g colostrum ကိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီး IgG Powder သည်အမှုန်တစ်ခုလျှင် IgG ၏ ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ကိုပေးနိုင်သည်။ အမှုန့်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပရိုတိန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည် (အမှုန်တစ်ခုလျှင် ၄ ဂ)
အထူးသဖြင့်အမှုန့်ရှိ immunoglobulin g colostrum ကိုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလူများ၏အားကောင်းသောအူလမ်းကြောင်းကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောအဏုဇီဝဗေဒနှင့်အဆိပ်များကိုအူ lumen တွင်တည်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၊ immunoglobulin g အကျိုးကျေးဇူးများတွင် -
ပိုမိုပြင်းထန်အူလမ်းကြောင်းရောဂါ (GI) အတားအဆီး
Mucosal ကိုယ်ခံစွမ်းအားတိုးမြှင့်ခြင်း, allergenic မဟုတ်သောအာရုံစိုက် Immunoglobulin ထောက်ပံ့မှု၏ကျေးဇူးကြောင့်
သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်သော IgG အမှုန့်သောက်သုံးမှုလုံးဝမရှိပါ။ သို့သော်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကတစ်နေ့လျှင်အမှုန့်တစ်လုံးသို့မဟုတ်တစ်ခွက်မျှအဆင်ပြေသည်ဟုအကြံပြုကြသည်။ IgG အမှုန့်ကိုအောင်စရေ ၄ အောင်စ / သင်အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာသို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းထည့်ပါ။
Immunoglobulin G (Igg) ချို့တဲ့ခြင်း
An Immunoglobulin G (IgG) ချို့တဲ့ခြင်း ကိုယ်ခန္ဓာမှ Immunoglobulin G ထုတ်လုပ်မှုမလုံလောက်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသောကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုရည်ညွှန်းသည်။ လူတစ် ဦး သည် IgG ချို့တဲ့လျှင်သူ / သူမသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားနည်းသောကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေပိုများသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ immunoglobulin g ချို့တဲ့ခြင်းသည်သင့်ဘဝ၏မည်သည့်အချိန်၌မဆိုသင့်ကိုသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေမှမည်သည့်အသက်အရွယ်မှမလွတ်ကင်းပါ။
ခုခံအားကျဆင်းမှု၏အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုဘယ်သူမှခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၎င်းသည်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုအလွန်သံသယရှိသည်။ ထို့အပြင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများက IgG ချို့တဲ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဆေးဝါးများနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
immunoglobulin g ချို့တဲ့မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် immunoglobulin ပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်သွေးစစ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ထို့နောက်ကာကွယ်ဆေးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ရန်ပlevelိပစ္စည်းများကိုတိုင်းတာသည့်အခြားရှုပ်ထွေးသောစမ်းသပ်မှုများသည်အခြေအနေရှိသည်ဟုသံသယရှိသူတစ် ဦး အပေါ်တွင်ပြုလုပ်သည်။
Immunoglobulin G ချို့တဲ့သောရောဂါလက္ခဏာများ
immunoglobulin g ချို့တဲ့သူသည်အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများကိုပြသဖွယ်ရှိသည်။
IgG ချို့တဲ့မှုကိုကုသရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကူးစက်မှုများပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုချင်းစီတွင်နည်းလမ်းများရှိသည်။ အကယ်၍ ရောဂါလက္ခဏာများသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါက၎င်းတို့သည်သင်၏ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများ / အလုပ်များနှင့်ဆက်မလုပ်ရန်တားဆီးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ချက်ချင်းကုသမှုသည်လုံလောက်နိုင်သည်။
သို့သော်ရောဂါကူးစက်မှုများသည်ပြင်းထန်ပြီးမကြာခဏဖြစ်လျှင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကုသမှုသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရေရှည်ကုသမှုအစီအစဉ်သည်ကူးစက်ရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်နေ့စဉ်ပantibိဇီဝဆေးများသောက်သုံးခြင်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်, immunoglobulin ကုထုံးအသုံးဝင်သောလိမ့်မယ်။
ဒီကုထုံးကခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောဂါပိုးတွေကိုပိုကောင်းအောင်တိုက်ထုတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်။ ၎င်းတွင်ပantibိပစ္စည်း (immunoglobulins) သို့မဟုတ်လူနာ၏အရေပြားအောက်ရှိအဖြေတစ်ခုအားကြွက်သားအတွင်းသို့ထိုးသွင်းခြင်းနှင့်သူ၏အာရုံကြောထဲသို့ထိုးသွင်းခြင်းပါဝင်သည်။
IgG အမှုန့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး သည် IgG ချို့တဲ့မှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Immunoglobulin G ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Immunoglobulin ကုထုံးပြီးနောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် immunoglobulin g ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
အသုံးအများဆုံး immunoglobulin g ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
ခဏခဏဖြစ်ပွားလေ့မရှိသော immunoglobulin g ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
immunoglobulin igG အရမ်းမြင့်တဲ့အခါ
အရမ်းမြင့်တယ် IgG အဆုတ်အအေးမိရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆုတ်တွင်းဘက်တီးရီးယား endocarditis၊ myeloma မျိုးစုံ၊ Hodgkin lymphoma၊ အသည်းရောင်အသားဝါဘီ၊
အလွန် IgG အဆင့်ကို IgG-၊ အချို့သောဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများ (ဥပမာ HIV နှင့် cytomegalovirus)၊ ပလာစမာဆဲလ်ရောဂါများ၊ IgG monoclonal gamma globulin ရောဂါနှင့်အသည်းရောဂါများတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။
immunoglobulin igG အရမ်းနိမ့်တဲ့အခါ
ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ (immunoglobulin g) သည်လူကိုထပ်ခါတလဲလဲကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်အန္တရာယ်မြင့်မားစေသည်။ immunoglobulin g နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကို antibody ချို့တဲ့မှု၊ immunodeficiency syndrome, non-IgG မျိုးစုံ myeloma၊ လေးလံသောသံကြိုးရောဂါ၊
ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့မှု၊ pemphigus၊ ကြွက်သား tonic နှင့်အာဟာရချို့တဲ့မှုရောဂါများအတွက်ပantibိပစ္စည်း၏အလွန်နိမ့်သောအဆင့်များမှာအချို့သောသွေးကင်ဆာ၊ ပြင်းထန်သောမီးလောင်ဒဏ်ရာများ၊
ဘယ်အချိန်မှာ immunoglobulin IgG လဲ
အလိုလျှင် immunoglobulin IgG ကကောင်းတယ် ဥပမာ Covid-19 သို့မဟုတ် dengue ကဲ့သို့သောရောဂါပိုးကူးစက်ရန်အတွက်၎င်းသည်စစ်ဆေးမှုခံယူသူသည်မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် immunoglobulin g အပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်ကထိုသူအားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှကာကွယ်ရန်မကြာသေးမီကကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသည်။
ထို့ကြောင့်၊ immunoglobulin g အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်သည်လူတစ် ဦး ၏အန်ဂျီဂျင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုအပြုသဘောဆောင်သောစစ်ဆေးမှုကိုအထောက်အကူပြုသောလက္ခဏာပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေး၏ရလဒ်အနေဖြင့်မဟုတ်ပါကရလဒ်ကောင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Is Immunoglobulin, G (Igg) ဘဝလှုပ်ရှားမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်?
Immunoglobulin G (IgG) သည်လူ့ဘ ၀ လှုပ်ရှားမှုများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လူများအားကျန်းမာရေးနှင့်အခြား Immunoglobulins များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့၏ဘ ၀ လုပ်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္playsတွင်ရှိသည်။
အထူးသဖြင့် IgG ပantibိပစ္စည်းများသည်ကိုယ်ခန္ဓာအရည်များ၌မျက်ရည်များ၊ ဆီး၊ သွေး၊ ဤအချက်ကိုထောက်ရှု။ ၎င်းတို့သည်အသုံးအများဆုံးပantibိပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိပantibိပစ္စည်းအားလုံး၏ ၇၅% မှ ၈၀% အထိရှိသည်မှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။
ပfluိပစ္စည်းသည်ထိုအရည်များနှင့်ထိတွေ့နေသောကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ / ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ IgG အဆင့်မပါရှိခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းသည်သင်ထပ်တလဲလဲဖြစ်နေသောရောဂါများကြောင့်သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာလှုပ်ရှားမှုများကိုကျေနပ်လောက်ဖွယ်တက်ရောက်ရန်မတက်ရောက်နိုင်ပါ။
ထို့အပြင် IgG သည်လူ့မျိုးပွားခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ပallိပစ္စည်းအားလုံး၏အသေးငယ်ဆုံးနှင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွင်းရှိအမြှေးပါးကိုထိုးဖောက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော antibody ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မမွေးသေးသောကလေးအားဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုမှကာကွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသော antibody ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့မပါရှိပါကမမွေးသေးသောကလေးများသည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အန္တာရာယ်ရှိနိုင်ပြီးအချို့မှာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်သက်တာဖြစ်နိုင်သည်။
Is Immunoglobulin အကြားမည်သည့်အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိသည် G နှင့် Lactoferrin?
immunoglobulin G နှင့် lactoferrin နှစ်မျိုးလုံးသည်လူနှင့်နွားများမှ bovine milk ၏အဓိကသဘာဝအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ immunoglobulin G ကဲ့သို့ပင်လေ့လာမှုများအရ lactoferrin သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိအကာအကွယ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။
၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါပိုးများကဲ့သို့သောရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအဏုဇီဝသက်ရှိများကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ရန်ကူညီသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၎င်းသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဒီတော့ lactoferrin ဖြည့်စွက်ဒီ function အတွက် immunoglobulin G အမှုန့်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော် lactoferrin နောက်ထပ် function ကိုရှိပါတယ်; သံစည်းနှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။
နောက်ထပ် Immunoglobulins အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်
ဘယ်တော့လဲ immunoglobulins ကိုစမ်းသပ်မလား။
တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင့်ဆရာ ၀ န်ကသင့်အား immunoglobulin စစ်ဆေးမှုခံယူရန်အထူးအကြံပြုလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်သူသည်သင်အလွန်နိမ့်သောသို့မဟုတ်အလွန်မြင့်မားသော immunoglobulin level ရှိသည်ဟုသံသယရှိသူဖြစ်သည်။ ဤစစ်ဆေးမှုသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ immunoglobulin ၏ပမာဏ (ပမာဏ) ကိုသတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အများအားဖြင့်တစ်ခု immunoglobulin စမ်းသပ်မှု သင်ရှိပါကအကြံပြုသည် -
အထူးသဖြင့်အကှေ့၊ အဆုတ်၊ အစာအိမ်၊
persistent / နာတာရှည်ဝမ်းလျှော
သင်ခရီးသွားပြီးနောက်ဖျားနာလျှင်သင်၏ဆရာဝန်ကသင့်အတွက် immunoglobulin test ကိုအကြံပေးခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်လိမ့်မည်။
ခုခံအားကျဆင်းမှု - ဤရောဂါသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ရောဂါများနှင့်ကူးစက်ရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်စွမ်းရည်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သည်
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် lupus တူသော autoimmune မမှန်
မျိုးစုံ myeloma တူသောကင်ဆာအမျိုးအစားများကို
ဤစစ်ဆေးမှုသည်များသောအားဖြင့် immunoglobulin အမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုတိုင်းတာသည်။ IgA, IgG နှင့် IgM ။ သင်၏ခုခံအားကျဆင်းမှုတုံ့ပြန်မှု၏ထိရောက်မှုကိုသင့်ဆရာဝန်အားပြသရန်ဤသုံးလုံးကိုအတူတကွတိုင်းတာသည်။
သင်၏သွေးနမူနာသည်ဤစစ်ဆေးမှုအတွက်နမူနာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်သူသည်ဆေးထိုးအပ်ကိုသင်၏လက်မောင်းအပိုင်းသို့ထိုးဖောက်သွားပြီးနောက်ခံသွေးပြန်ကြောများထဲမှတစ်ခုကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ထို့နောက်နည်းပညာရှင်သည်သွေးကိုပြွန်သို့မဟုတ်အပ်နှင့်တွဲနေသောဖလားထဲသို့စုဆောင်းခွင့်ပြုသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆရာ ၀ န်ကစစ်ဆေးမှုအတွက်သွေးအစားသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာအရည် (CSF) ကိုသုံးဖို့ရွေးချယ်နိုင်တယ်။ ဦး နှောက်နှင့် ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသောအရည်သည် ဦး နှောက်နှင့်ဆိုင်သောအရည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကျောရိုးမှအရည်ကိုထုတ်ယူရန်သင်၏နည်းပညာရှင် lumbar puncture ဟုခေါ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အရည်နမူနာ၏ထုတ်ယူအတော်လေးနာကျင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်ဒေသခံမေ့ဆေးပါဝင်ပတ်သက်ကျွမ်းကျင်သူများထိခိုက်နစ်နာခန္ဓာကိုယ် site ကိုနာကျင်မှုမှမခံစားနိုင်အောင်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်ကပထမဆုံးနာကျင်မှုဝေဒနာကိုသက်သာစေရန်အတွက်မေ့ဆေးပေးသည့်ဆေးကိုသင်၏ကျောဘက်သို့ထိုးသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပြီးရင်ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်သူကစားပွဲပေါ်ထိုင်ပြီးသင့်ဒူးကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။ တနည်းအားဖြင့်စားပွဲပေါ်ထိုင်ဖို့သင့်ကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သငျသညျနှစ်ခုရာထူးတစ်ခုခုကို၌ရှိကြ၏အခါ, ပညာရှင်သင့်ရဲ့အောက်ပိုင်းကျောရိုးကျောရိုးကျောနှစ်ခုတည်နေရာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါအချက်သည်ပညာရှင်သည်သင်၏တတိယနှင့်စတုတ္ထ lumbar vertebrae အလယ်၌ဆွန်းအပ်ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင့် ဦး နှောက်နှင့်ဆိုင်သောအရည်အနည်းငယ်သည်အချည်းနှီးသောအပ်ထဲသို့စုပြုံသွားလိမ့်မည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပညာရှင်သည်အပ်အတွင်း၌စုဆောင်းထားသောအရည်နှင့်အတူအပ်ကိုထုတ်ယူလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ အရည်နမူနာကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် immunoglobulin-specific-detective kit ပေါ်တွင်တင်ပါလိမ့်မည်။
Immunoglobulin G (IgG) သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအခြားအရေးကြီးသော immunoglobulins များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားသူများမှာ IgA, IgD, IgE နှင့် IgM တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ Immunoglobulins အမျိုးအစားလေးမျိုးအနက် IgG သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအများဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရောဂါပိုးများ (ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များ) အားတိုက်ဖျက်ရာတွင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ခန္ဓာကိုယ်အရည်များတွင်ပါဝင်သည်။
အလွန်နည်းသောသို့မဟုတ်မြင့်မားသော immunoglobulin G သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးသည်။ immunoglobulin g ချို့တဲ့မှုတစ်ခု၊ IgG အမှုန့်ကိုဝယ် နှင့်အသုံးပြုမှုကိုသင်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတစ်ခုခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Saadoun, အက်စ်, ရေ, P. , ဘဲလ်, BA, ဗင်းဆင့်, အေ, Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010) ။ neuromyelitis optica immunoglobulin G နှင့်လူ့ဖြည့်စွက်မှုကို Intra-cerebral Injection ထိုးခြင်းသည်ကြွက်များတွင် neuromyelitis optica ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးနှောက်ကို, 133(2), 349-361 ။
Marignier, R. , နီကိုးလ်, အေ, Watrin, C တို့, Touret, အမ်, Cavagna, အက်စ်, Varrin-Doyer, အမ်, ... & Giraudon, P. (2010) ။ Oligodendrocytes astrocyte ဒဏ်ရာကနေ neuromyelitis optica immunoglobulin G ကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်။ ဦးနှောက်ကို, 133(9), 2578-2591 ။
Berger, အမ်, Murphy က, အီး, Riley, P. , & Bergman, GE (2010) ။ အရေပြားအောက်ဆုံး immunoglobulin G. နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကုသနေစဉ်အဓိကအရည်အသွေးတိုးတက်မှု၊ immunoglobulin G အဆင့်များနှင့်အဓိကကိုယ်ခံအားကျခြင်းရောဂါများရှိသည့်လူနာများတွင်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းများတိုးတက်လာခြင်း တောင်ပိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 103(9), 856-863 ။
Radosevich, အမ်, & Burnouf, တီ (2010) ။ သွေးကြောသွင်း immunoglobulin G: ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများ၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးအာမခံခြင်း။ Vox sanguinis, 98(1), 12-28 ။
Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010) ။ Immunoglobulin G: ကျောရိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက် neuroinflammation ကိုလျော့ချရန်အလားအလာရှိသောကုသမှု။ လက်တွေ့ immunology ၏ဂျာနယ်, 30(1), 109-112 ။
Bereli, N. , Şener, G. , Altıntaş, EB, Yavuz, H. , & Denizli, A. (2010) ။ Poly (glycidyl methacrylate) ပုတီးစေ့နှင့် albog နှင့် immunoglobulin G. အများ၏ pseudo-specific ဆှဖှေဲ့ကွယ်ပျောက်သွားဘို့ cryogels embedded ။ ပစ္စည်းများသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာ: C, 30(2), 323-329 ။